Shaashadaha iPhone XI ee soo socda waxay ka imaan doonaan Samsung iyo LG Wararka IPhone
Toni Cortés | | Noticias, Terminalka IPhone, dhowr
Saddexda iPhone XIs ee sanadkan ayaa wadaagi doona shaashadaha Samsung iyo LG
Taariikhda sii deynta ee taleefannada Apple marwalba waa la hayaa illaa daqiiqadda ugu dambeysa. Taariikhda ayaa isku soo noqnoqota sanadba sanadka ka dambeeya bisha Sebtember badiyaa waa midka loo doorto in lagu soo bandhigo bulshada dhexdeeda, sidaas awgeedna kor u qaadida iibinta Kirismaska
Ilaa hadda, Samsung waxay ahayd shirkad gaar ah oo ka mid ah alaabooyinka OLED ee taleefannada Apple, laakiin kuwa Cupertino, ma ahan kuwo saaxiibtinimo leh oo ku tiirsan hal bixiye, waxay umuuqataa inay xirayaan heshiisyada LG iyo BOE.
Sida laga soo xigtay MacRumors, shirkadda Kuuriya LG waxay u badan tahay inay taageeri doonto soosaarka bandhigga OLED sanadkan iyo liiska alaab-qeybiyeyaasha waxaa suuragal ah in lagu ballaadhiyo soo saaraha Shiinaha ee BOE, oo hore loogu soo galay 2020.
BOE waa shirkad horseed u ah Shiinaha soo saare rajo leh dhammaan noocyada bandhigyada LCD. Waxay hadda horumarinaysaa jiilka soo socda ee OLED, oo ay ku jiraan kuwa dabacsan ee loogu talagalay taleefannada casriga ah ee isku laaban ee soo muuqday sannadkan oo dhan.
Soo baxay wararka marka la eego taas oo sheegaysa LG iyo BOE waxay u bilaabi doonaan sidii adeeg bixiyeyaal dheeri ah si ay uga taageeraan Samsung bixinta shaashadda OLED, horaantii sannadkan, iyo xoojinta wax-soo-saarka 2020. Apple waxay higsaneysaa inay kala duwdo silsiladda wax soo saarka dhammaan qaybaha ka kooban aaladahaaga. Waxa caadiga ah waa in la hubiyo ugu yaraan laba alaab-qeybiye qayb kasta. Istaraatiijiyad lama huraan ah oo yareyneysa halista sahayda, waxayna ku siineysaa awood aad ku wajahdo wada xaajoodyada suurtagalka ah ee aad la leedahay alaab-qeybiyeyaasha. Cook wuxuu had iyo jeer jeclaa inuu qaato gacanta sare.
Apple ayaa la filayaa inay soo saarto saddex iPhone oo cusub sanadkan, laba nooc oo leh shaashad heer sare ah oo ah 5.8 inji iyo 6.5 inji OLED, iyo moodel aasaasi ah oo leh shaashad 6.1 inji LCD ah.
Sanadka 2020, wax walba waxay muujinayaan in dhammaan noocyada iphone-yada ay la socon doonaan shaashadda OLED, oo leh cabbirro ah 5.4, 6.1 iyo 6.7 inji.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » Shaashadaha iPhone XI ee soo socda waxay ka imaan doonaan Samsung iyo LG.
Cirka: Carruurta Iftiinka, ciyaarta ugu fiican ee lagu raaxeysto xagaaga